Mind Alive - စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်အပန်းဖြေခြင်း
Login0ပစ္စည်းများ - $0
DAVID မွေ့လျော် Pro ကို
DAVID ALERT Pro ကို
Mind Alive Oasis Pro CES စက်ပစ္စည်း
အသံ - အမြင်အာရုံဆိုင်ရာဖျော်ဖြေရေး (AVE)
Cranio-Electro လှုံ့ဆော်မှု (CES)
transcranial DC ကိုနှိုးဆွ (tDCS)
Tone နှင့် Binaural စည်းချက် Entraining
စိတ်ဖိစီးမှု & PTSD
အထူးလိုအပ်ချက်များ & အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ
သင့်ဘဝ၏ရှုထောင့်များစွာကို ဦး နှောက်လှုံ့ဆော်မှုဖြင့်တိုးတက်စေပါ
Mind Alive ဒေးဗစ်မွေ့လျော် ...................
DAVID Delight သည်ထူးခြားဆန်းပြားပြီးရိုးရှင်းသည့်အသံနှင့်အမြင်အာရုံကို (ပေါင်းစပ်ထားသော brainwave entrainment ဟုလည်းခေါ်သည်) ကိုပေါင်းစပ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ခန်းစာများကိုစေ့စပ်သေချာစွာစမ်းသပ်ပြီးပြီ ဖြစ်၍ သင့်အားအထိရောက်ဆုံးရလဒ်များကိုသေချာစေရန်လက်ရှိသုတေသနတွေ့ရှိချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။
DAVID Delight Plus သည်အမျိုးအစားတစ်ခုစီတွင် ၅ ခုပါ ၀ င်သည့် DAVID Delight နှင့်ဆင်တူသည်။ DAVID Delight Plus မှအပိုအစည်းအဝေးများသည် fibromyalgia နှင့်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါများပိုမိုရှုပ်ထွေးသောသူများအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။
Mind Alive DAVID Delight Pro ကို ...................
DAVID Delight Pro တွင်အစည်းအဝေးများတွင် DAVID Delight Plus နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး Cranio-Electro Stimulation (CES) ကိုလည်းပေးသည်။ CES ၏ကြိမ်နှုန်းသည် AVE session များ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပေါင်း 100 Hz နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ AVE ကိုသူ့ဟာသူ၊ CES ကိုအတူတူသုံးနိုင်သည်။
Mind Alive DAVID ALERT Pro ကို ...................
DAVID ALERT Pro ကို ယခုသင်သည် DAVID ALERT ပရိုဂရမ်နှင့် Cranio-Electro Stimulation (CES) ၏တိုးမြှင့်အကျိုးကျေးဇူးများဖြင့်အစည်းအဝေးများကိုခံစားနိုင်သည်။
DAVID ALERT Energizing, Restorative Technology (ALERT) မှတဆင့်နေထိုင်ခြင်းသည်ထိရောက်သော၊ အခြားရွေးချယ်စရာကုထုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် AVE နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ hyperactivity ကိုအခြေချရန်၊ အပန်းဖြေရန်အားပေးခြင်း၊
Mind Alive ဒေးဗစ် SMART ...................
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေရန်အတွက် DAVID SMART ၏သင်ခန်းစာများကိုရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။
Mind Alive OASIS Pro ကို ...................
Oasis Pro Cranio-Electro Stimulation Oasis Pro (CES) ကို ၁၉၄၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်ဆိုဗီယက်ယူနီယံတွင်တီထွင်ခဲ့ပြီးအိပ်မပျော်မှုကိုကုသသည့်အနေဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူများကအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
Spectrum ™ USB မျက်လုံးဖြင့် PC မှအချိန်နှင့်တပြေးညီအမြင်အာရုံကိုခံစားကြည့်ပါ။ (တစ်ခုတည်းသော WINDOWS 10) သန်းပေါင်းများစွာသောရောင်ပြန်ဟပ်အရောင်များကိုထောက်ပံ့သည်။
Mind Alive ထုတ်ကုန်များကသင့်ဘဝ၏ရှုထောင့်များစွာဖြစ်သောသင်၏ကျန်းမာရေး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်ပတ်မှု၊ အိပ်စက်ခြင်း၊ ဒီနေ့စမ်းကြည့်ပါ ဦး
သင်အိပ်ပျော်ရန်အခက်အခဲရှိပါသလား။ သင်နိုးသောအခါ ပို၍ အနားယူလိုပါသလား။ The Delight Pro သည်အိပ်စက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မီနူးမှဖြေရှင်းချက် link ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုဖတ်ပါ
သင်၏မှတ်ဉာဏ်သည်ယခင်ကကဲ့သို့မကောင်းကြောင်းသတိပြုမိပါသလား။ မင်းရဲ့ဟန်ချက်နဲ့အခက်အခဲရှိရင်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကျသွားတာလား။ DAVID မွေ့လျော်မှုကသင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။
ရာသီအလိုက်ထိခိုက်လွယ်သောရောဂါ (SAD) မှသင်ခံစားရပါသလား။ ဆောင်းတွင်းဘလူးကိုရပါသလား DAVID Delight Plus သည်သင်၏ SAD လက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန်ကူညီနိုင်သည်။
သင် Post- စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ (PTSD) ခံစားနေရပါသလား ပြင်းထန်သောစိတ်ဒဏ်ရာကိုသင်ခံစားဖူးပါသလား DAVID Delight Pro သည်သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုလျှော့ချရန်နှင့်စီမံရန်ကူညီနိုင်သည်။
နာကျင်မှုနှင့်အဆင်မပြေမှုများကိုသင်ကြုံတွေ့နေရပါသလား။ ဆေးဝါးများသောက်ခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်သည့်ချဉ်းကပ်မှုမျိုးလိုချင်ပါသလား။ Audio-Visual Entrainment ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
မင်းအပြာလား မင်းစိတ်ဓာတ်ကျလား သင်သည်သင်၏စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူရုန်းကန်ပါသလား DAVID Delight သည်ကျန်းမာမှုကိုရရှိရန်ကူညီနိုင်သည်။ Header menu ရှိ Solutions link ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုဖတ်ပါ
သင့်တွင် ADD / ADHD ရောဂါရှိပါသလား။ သငျသညျအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်သင်ယူမှုနှင့်အတူရုန်းကန်ပါသလား DAVID ALERT နှင့် ALERT Pro တို့သည်သင်၏ ADD / ADHD လက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
စိုးရိမ်ပူပန်မှုကသင့်ဘဝကိုအပြည့်အဝတွေ့ကြုံခံစားနေပြီလား။ သွားဆရာဝန်ဆီသွားရန်၊ စာမေးပွဲဖြေရန်၊ ကားမောင်းရန်သို့မဟုတ်အလုပ်၏ဖိအားများကိုရင်ဆိုင်ရန်ကြောက်ရွံ့သလား။ သင်မကြာခဏအလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှုခံစားရပါသလား DAVID Delight Plus သည်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။
သင်ရုန်းကန်နေရပြီးကျောင်းစာနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရပါသလား မင်းရဲ့ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်ပါသလား။ David SMART သည်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။
မင်းရဲ့ဂိမ်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်သလား။ အားကစား၌, လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ "အဆင်သင့်" သော့ချက်ဖြစ်ကြသည်နေစဉ်, ဖိအားအောက်မှာအာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းနည်းတူအရေးကြီးပါသည်။ Delight Pro သည်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။
လေ့လာမှုကဘာဝနာသည်အိုမင်းခြင်းကိုနှေးကွေးစေခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်ဇီဝကမ္မဗေဒကိုပြောင်းလဲစေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ တွေးတောဆင်ခြင်မှုကိုတရားအားထုတ်ရာ၌ထိန်းသိမ်းထားပုံရသည်။ တရားထိုင်ခြင်းတွင်မီးခိုးရောင်ကိစ္စများဖြစ်သည်။
Mind Alive DAVID AVE စက်ပစ္စည်းများ
© 2020 Mind Alive - စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်အပန်းဖြေခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာများနှင့်ကြော်ငြာများကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏အသွင်အပြင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသွားအလာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် cookies များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်။ သင်၏ဆိုက်ကိုသင်၏လူမှုမီဒီယာ၊ ကြော်ငြာနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမိတ်ဖက်များနှင့်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းဝေမျှသည်။	ထပ်မံကြည့်ရှုရန်
cookies များကို settings ကို
Privacyverklaring အီးယူ MIND ALIVE, gevestigd aan Molenstraat 18 7075 ဘီစီ Etten Nederland သည်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဆက်သွယ်ရန်။ https://shop.mindalive.eu/ Molenstraat 18 7075BC Etten Nederland 0031 681902122 Dhr. T. Wolsing is de Functionaris Gegevensbescherming van MIND ALIVE Hij/zij is te bereiken via info@mindalive.nl Persoonsgegevens die wij verwerken အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်ပါစေဤအရာကိုဖြည့်စွက်ပါ။ Vier- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres မှ Hieronder vindt နှင့် een overzicht van de persoonsgegevens Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens wij verwerken ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အပေါ်တွင်ရှိသူများသည်အရှိန်အဟုန်မြှင့်သော ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါဝင်သော ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်များသည်အသက် ၁၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ Tenzij ze toestemming ၏ vobd ၏ hebben van ouders ။ ကျနော်တို့ 16 ဖြစ်ပါတယ် echter niet ထိန်းချုပ်မှု kunnen ဤ 16 ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှလှုပ်ရှားမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သောကြင်နာတတ်သည့်ကလေးငယ်များသည်စွမ်းရည်ပြည့်ဝသောစကားလုံးများအားပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤသည်ကိုကျော်လွန်သွားပါကသင့်အားဤကဲ့သို့ဆက်သွယ်မှုများသည်အလွန်ထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုများကို info@mindalive.nl မှတစ်ဆင့် info@mindalive.nl မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်၍ ဆက်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ကိုအခြေခံသည် van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken စိတ်ရင်းစေတနာကောင်းဖြင့်လုပ်ခြင်း - စကားဝိုင်းများကိုအနိုင်ယူခြင်း - အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိခြင်း မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကမျှမတူကွဲပြားသောပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် - အကောင့်ဖွင့်လှစ်ထားခြင်း သငျသညျအဘယျသို့ရှိပါသလဲ Geautomatiseerde besluitvorming အသက်ရှင်လျက်စိတ်ထဲ မဟုတ် ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အခြေခံအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်၏ -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MIND ALIVE) အရိပ်အောက်ရှိအမျိုးသမီးများအိမ်တံခါးပေါက်သည်စကားဝိုင်းတွင်ရှိနေသည်။ ကျနော်တို့ bewaren persoonsgegevens loe ALD အသကျရှငျနိုငျပါသညျ, persoonsgegevens ဤမျှကာလပတ်လုံးဤမျှလောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းငှါ၎င်း, သင်အမှန်တကယ်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်သည်အတိုင်းဤစကားလုံး verzameld ။ ၀ န်ကြီးဌာနမှ ၀ န်ထမ်းများ (အမျိုးအစား) persoonsgegevens> Bewaartermijn 24 maanden ivm garantie Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens Delen van persoonsgegevens နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် MIND ALIVE သည်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဗိုင်းရပ်စ်သည်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကွတ်ကီးများ၊ vergelijkbare technieken ၏, wij gebruiken ALD ရှင်သန်ခြင်းဖြည့်စွက်ခြင်း vergelijkbare technieken ၏ geen cookies များ။ Gegevens inzien, verwijderen ၏ aanpassen လူကြီးမင်းများအနေဖြင့်အထူးအခွင့်အရေးများကိုရယူနိုင်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်တံခါးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များသို့ရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည်တံခါးဖွင့်လှစ်ထားသည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်အတွင်းရှိဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများအဆင်ပြေစွာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။ verzoek ၏အထူးသဖြင့်သည်းခံခြင်း, မှန်ကန်သော, verwijdering, gegevensoverdraging ၏ verzoek ၏သန္ဓေတည်ခြင်း၏ဗဟုသုတအားလုံး၏စိတ်ဝင်စားမှုကို info@mindalive.nl ။ အားလုံးသောတံခါးဖွင့်ထားသည့်တံခါးကိုသင်ဤအတိုင်းပြုလုပ်ထားပါ။ ဤကော်လံတွင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုဤသူသည်မှန်ကန်စွာတွေ့နိုင်သည်။ MRZ (စက်ဖတ်နိုင်သောဇုံ၊ နံပါတ်များကိုတွေ့နိုင်သော)၊ paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ။ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှ zo snel mogelijk၊ ALD အသကျရှငျရနျသငျသညျအမြိုးသမီးမြားအပေါငျးတို့သညျလကျရှိအလုပျမြားကိုဖှဲ့စညျးဖှယျကောငျးမှနျပါသညျ၊ de volgende link မှတစ်ဆင့် https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen အသက်ရှင်ပြန်ရှင်သန်နေသောဗန်ဒီဂင်သည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများနှင့်အရင်းအမြစ်များ၊ ဤသည်ကိုဆက်သွယ်ပါက info@mindalive.nl မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အသက်ရှင်ရန်ဖြည့်စွက်ပါ - ဤသူသည်ခြေထောက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် - [voeg hier eventueel and maatregelen die to aan toe toe] ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲလ်၊ - TLS (voorheen SSL) အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မှုများ။ ဤလိပ်စာသည် adresbalk တွင် 'https' နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
settings ကို Save